Diyaarad sida lacag badan oo kaash ah oo lagu qabtay garoonka diyaaradaha Muqdisho - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaDiyaarad sida lacag badan oo kaash ah oo lagu qabtay garoonka diyaaradaha Muqdisho
April 8, 2018 Puntland Mirror Somalia 0
Muqdisho-(Puntland Mirror) Ciidamada ammaanka ee ku sugan garoonka diyaaradaha ee Muqdisho ayaa galabta oo Axad ah qabtay diyaarad siday lacag malaayin dollar ah oo aan la xaqiijin tiradeeda, sida ay sheegayaan ilo-wareedyadu.
Diyaarada ayaa ka timid dalka Isutaga Imaaraatka Carabta. Lama yaqaan ilaa iyo hadda halka ay lacagtu ku socotay.
Ilo-wareedyo madaxbanaan ayaa sheegaya in lacagta la dhigay Bangiga Dhexe Ee Soomaaliya, lana bilaabay baaritaan.
July 11, 2018 Midowga Yurub oo Soomaaliya ugu deeqay in ka badan $100 milyan oo gargaar biniaadanimo ah
July 26, 2018 Masuul katirsan Wasaaradda Gargaarka iyo Maareynta Musiibooyinka Soomaaliya oo eedaymo musuqmaasuq loogu xiray Muqdisho
Baarlamaanka Soomaaliya oo Isniinta kulan yeelan doona si ay cod ugu qaadaan mooshinka ka dhanka ah guddoomiye Jawaari